निर्जला कक्षपति, चैत्र १९, २०७६
कोरोना त्रासका कारण मुलुकमा अकस्मात् लकडाउन भएपछि हामी सबैलाई यतिबेला सबै कुराको तारतम्य मिलाउन कठिन त भएको छ नै, अन्य देशमा जस्तै कोरोनाले महामारीको रूप त लिने होइन ?भन्ने डर पनि छ । मुलुक लकडाउन भएपछि तरकारी तथा खाद्यान्नहरूसहज अवस्थामा...
भोलामान सिंह बस्नेत, चैत्र १८, २०७६
प्रज्वल अधिकारी, चैत्र १८, २०७६
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी', चैत्र १८, २०७६
कोरोना भाइरसका विषयमा चर्चा भइरहँदा भाषाको विषयले पनि मलाई केही कुतकुती लगायो । हामी आयातीत भाषालाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्दैनौँ । जे आउँछ, त्यसैलाई सर्वेसर्वा मान्छौँ । संवेदनाको विषय कोरोनाभित्र छ तर यो एक दिन अवश्य शान्त हुन्छ र हुनुपर्छ...
राजकुमार महर्जन, चैत्र १७, २०७६
जसले यो कुरा नपढी हुन्थेन, उनले सायदै पढ्लान्किनकि उनीहरूलाई लकडाउन कस्तो रहेछ भनी गल्लीगल्ली, चोकचोकमा डुल्दै फुर्सद छैन । हाँसो र गिल्ला गर्दै फुर्सद छैन । धन्यवाद छ तपाईँलाई, जो पूर्ण अनुशासन पालना गरिरहनुभएको छ । दुःखको कुरा, तपाईं हामी...
पहुँचको दुरुपयोग: सहरका पूर्वाधार सरकारले बनाइदिनुपर्ने ! गाउँमा जनता आफैँले बनाउनुपर्ने !!
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, चैत्र १६, २०७६
सरकारले सहर र गाउँलाई फरक ढङ्गले हेरेको छ । सहरमा खानेपानीको ढल सरकारले बनाइदिने गर्छ । गाउँमा खानेपानी लैजानु पयो भने जनताले पानीको पाइप बोक्नु पर्छ । खाल्डो खन्नु पर्छ । पुर्नु पर्छ । यो अहिलेको रोग होइन । धेरै...
अंशु भूसाल, चैत्र १६, २०७६
जनस्वास्थ्यको मूल उद्देश्य भनेको रोग लोगर उपचार गर्नुभन्दा लाग्न नदिनु हो । अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा रहेको नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड १९ले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । कोरोनाले अत्यन्तै संक्रामक रूप लिँदै गइरहेको छ । पहिलो पटक २०१९...
आरोप प्रत्यारोपमा चीन र अमेरीकाः के ‘कोभिड १९’ ल्याबमा निर्मित हो त ?
सरोज ज्ञवाली, चैत्र १६, २०७६
हाल सम्पूर्ण विश्व कोरोना भाइरस कोभिड १९ सँग जुध्न एकजुट भइरहेको अवस्था छ । हालै सम्पन्न भएको सार्क राष्ट्र र जी २० का राष्ट्रहरूबिच भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा सम्पूर्ण राष्ट्रहरू एकजुट भई कोरोना भाइरसको महामारीलाई निर्मूल पार्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्...
लकडाउनः राज्यले लगाएकाे 'कर्फ्यु !', बहादुरी र घरको लक्ष्मण रेखा
निर्जला कक्षपति, चैत्र १४, २०७६
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सरकारले मुलुकमा लकडाउन गरेको छ । यो समयमा कतिपय मानिसहरूले घरमा बस्न आफूहरूलाई सकस भएको भन्दै साँझ ५ बजे पछि अन्य समयमा राज्यलेकर्फ्यु बेला झैँ घर बाहिर हुरुरु निस्कने गरेको देखिन्छ । सरकारले अकस्मात्...
शोधकर्ता, वैज्ञानिक र राष्ट्राध्यक्षहरुका आ-आफ्नै पूर्वानुमानः कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण कहिले ?
सरोज ज्ञवाली, चैत्र १३, २०७६
अहिले विश्व कोरोना भाइरस कोभिड १९ र यसको सङ्क्रमणबाट आतङ्कित भइरहेका छ ।विश्वका धेरैजसो सहरहरू सुनसान भइरहेका छन् र कतिपय देशहरू लकडाउनको अवस्थामा छन् । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ४ लाख भन्दा बढी मानिसहरू यसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् र २० हजारभन्दा बढीको...
बम बानियाँ, चैत्र १२, २०७६
कोरोना भाइरस के हो ? यसको सत्य के हो ? हामीमा के कस्ता त्रासहरू छन् र भोगिरहेका छौँ ? केके मिथहरू आइरहेका छन् ? वास्तविकता के हो ? सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय कति सही छन्, कति गलत छन् ? आज...
चिनी अर्थात् ‘सुगर’ रोगको इतिहासः नामकरणदेखि उपचारका लागि ‘इन्सुलिन’को विकाससम्म
प्रा.डा.डम्बरबहादुर कार्की, चैत्र ११, २०७६
हिजोआज डायबेटिज अर्थात् चिनी रोगको विषयमा थाहा नपाउने मानिसहरूधेरै कम छन् । चिनी रोगलाई मधुमेह पनि भनिन्छ । चिनी रोगमा धेरै पिसाब हुनुकासाथै प्यास पनि बढी नै लाग्ने गर्छ । मुख सुक्नु, ज्यादा खाना रुचिहुनुका साथै दृष्टि कमजोर हुनु, दुब्लाउँदै...
गाउँबाट सहर पसेको ‘ढिँडो’को समाजशास्त्र
डा. धनप्रसाद सुवेदी, चैत्र १०, २०७६
पहिले पहिले पहाडमा बस्नेहरूले धित मर्नेगरी चामलको भात खान पाउँदैनथे । केही धनीमानीहरूलाई छाडेर पहाडमा बस्नेले चामलको भात खान विशेष चाडपर्व पर्खिनुपर्थ्यो । तिथि, श्राद्ध आउँछ, पाहुना त्यसमा पनि सम्धी नै आउन सक्छन् भनेर माटाका गाग्रातिर धान लुकाएर राख्नुपर्ने विवशता...
कोरोना सन्त्रास, बालमनोविज्ञान र अभिभावकको भूमिका
राजकुमार महर्जन, चैत्र १०, २०७६
आजभोलि हरेक दिनको सुरुवात कोरोना भाइरसको आतंक र सोसँग सम्बन्धित विषयहरू पत्रपत्रिका, अनलाइन समाचार, सामाजिक संजाल, रेडियोटेलिभिजन आदिमा पढेर, सुनेर वा हेरेर सुरु हुने गरेको छ । राती निदाउनुअघि पनि त्यस्तै कुराहरू मनमा खेलिरहने अवस्था बनेको छ । त्यसको अलावा...
बहुआयामिक दृष्टिकोणको खोजीः जमिन कसको ? विकल्प के ?
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, चैत्र ९, २०७६
जमिन कसको ? यो सबै नेपालीको प्रश्न हो । पहिलेको बनोटले जमिन सरकारको हो । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले जमिन सिपाहीलाई दिए, तलबको रूपमा । तिनका छोराछोरीहरूलाई मरवट दिए, मरेका सिपाहीका सन्तानलाई पढाउनका लागि । मरवट भनेको वृत्ति पनि हो ।...
वृद्ध आमाबुबालाई हेप्ने पुस्ता र यान्त्रिक दबदबा
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’, चैत्र ९, २०७६
आजको पुस्ताको स्वभावलाई तपाईंहरुहेरेर पुराना पुस्ता किन दुखी हुन्छन् ? नौ महिना कोखमा भोगेका लाखौँ पीडा र वेदना अनि प्रसवको हण्डर जीवन र मृत्युको दोसाँध थियो । सन्तानको जन्मसँगै अघिका सारा वेदनालाई सन्तानको मुख हेरेरै बिर्सने ममता कति महान् हुँदो...
प्रेमले पूर्ण निर्मोही र म
डा. घनश्याम परिश्रमी, चैत्र ८, २०७६
सृशष्टिको सार हो मान्छे, उच्चमा पनि उच्च छ सृष्टिको झार हो मान्छे, तुच्छमा पनि तुच्छ छ । निर्मोही व्यास (बग्दैबग्दै कवितासङ्ग्रहको &#39;विडम्बना&#39; कविताबाट) व्यास दाइले निबन्ध विधाका प्रभेद नियात्रा र संस्मरण धेरै लेख्नुभएको छ । त्यसैले उहाँको साहित्यिक पहिचान विशेषतः...